San Htun's Diary: ခရီးသွားခြင်း အနုပညာ ...
ကိုစကာရီကာ၊ ပနားမား ခရီးစဉ်ကို စတင်တဲ့သူက ဗီယက်နမ်မလေးဝိုင်းပါ။ ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလကုန် မန်မိုရီယမ်ဒေးပိတ်ရက် ကိုစကာရီကာ၊ ပနားမားကို သွားမလို့ စီစဉ်ထားတာ ဝိုင်းရဲ့ ယူအက်စ်ဗီဇာက ၆ လသက်တမ်းမရှိတော့လို့မသွားဖြစ်လိုက်ဘူး။ ဝိုင်းက ယူအန်မှာ လုပ်နေတာ အလုပ်ဗီဇာက တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် သက်တမ်းတိုးရတယ်။ ခရီးမသွားခင် ဗီဇာသက်တမ်း ၆ လ ရှိသေးရဲ့ လားဆိုတာ မစစ်လိုက်ဘူးထင်တယ်။ ရာမားပြောသလို smart people make stupid mistakes ဆိုပါတော့။ ဘွတ်ကင်လုပ်ထားတဲ့ တိုးခရီး ၂ ခုက ပိုက်ဆံပြန်ပေးတယ် လေယာဉ်လတ်မှတ်ကလည်း ပိုက်ဆံပြန်ပေးတော့ တော်သေးတာပေါ့။ ကိုယ်က အဲဒီတုန်းက ဆူနမ်၊ ရာမားတို့ ဆီ သွားလည်နေတာ။ ဝိုင်း နောက်တကြိမ်သွားလည်မလို့စီစဉ်တော့ ကိုယ့်ကိုလိုက်မလားလို့ခေါ်တယ်။ ကိုယ်က လိုက်မယ် ဆူနမ်၊ ရာမားတို့ ကိုလည်း ခေါ်လို့ ရလားဆိုတော့ ရတယ်တဲ့။ ရာမားက ဒီဇင်ဘာမှာ ဟာဝိုင်အီကို သွားထားလို့မလိုက်တော့ဘူး။ ဆူနမ်က ဒီဇင်ဘာမှာ လန်ဒန်ကို သွားထားပေမယ့် စိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့။ ဝိုင်းစီစဉ်ထားတာက ၄ ရက်ခရီး ကြသပတေးနေ့ညဥ့်နက်သန်းခေါင်း လေယာဉ်စီး။ နောက်နေ့ မနက်ရောက် မြို့ လည်ခေါင်က ဟိုတယ်မှာတည်း ဟိုဒီလျှောက်ကြည့်။ တိုး ၂ ခု ဘွတ် တိုးတွေက မြို့ လည်ခေါင်က ဟိုတယ်တွေဆို လိုက်ခေါ်ပေးတယ်။ နောက်ဆုံးနေ့မနက်စောစော ၁ နာရီဝေးတဲ့ ပနားမားကိုသွား ၁၀ နာရီ ထရန်စစ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ ပနားမားတူးမြောင်းကိုသွားလည်။ ကိုစကာရီကာနဲ့ပနားမားက ယူအက်စ်ဂရင်းကဒ်၊ စီတီဇင်တွေဆို ဗီဇာမလိုဘူး။ ဝိုင်းက နှစ်သစ်ကူးချိန် ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ ဗီယက်နမ်ကို ပြန်လေ့ရှိတယ်။ ဒီလိုနဲ့၃ ယောက် အဆင်ပြေတယ့်အချိန်ကို ရွေးလိုက်တော့ မတ် ၁၆ ကနေ ၁၉ အထိ သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ သောကြာ၊ တနင်္လာနေ့ ခွင့်ယူ၊ တနင်္လာနေ့ညဥ့်သန်းခေါင်မှ ပြန်ရောက်မှာမို့ အင်္ဂါနေ့ ကို နေ့ တဝက် ဒါမှမဟုတ် တနေ့ လုံးခွင့်ယူပြီး အနားယူ။
နယူးယောက်ကနေ ကိုစကာရီကာနိုင်ငံမြို့ တော် ဆန်ဟိုဆေးကို လေယာဉ်တိုက်ရိုက်ရှိပေမယ့် ပနားမားကို ဝင်လည်ချင်လို့ပနားမားမှာ ထရန်စစ်ထိုင်တယ်။ ၄ ရက် ၂ နိုင်ငံ လေယာဉ်လတ်မှတ် ၅၀၀၊ တိုး ၂ ခုက ၃၀၀၊ ဟိုတယ်၊ ပနားမားတိုး ၂၀၀၊ ဘာဘာညာညာ ၁၃၀၀ - ၁၅၀၀ ကုန်မယ်လို့ခန့် မှန်းထားတယ်။ ဝိုင်းက မတ်လဆန်းမှာ မတ်ဒါကာစကာကို အရေးပေါ်သွားရဖို့ဖြစ်လာတယ်။ ဝိုင်းပါအောင် ရက်ကို ရှေ့ တိုးနောက်ဆုတ် ကြိုးစားကြသေးတယ်။ ရက်ပြောင်းရင် လေယာဉ်လတ်မှတ် ပြောင်းခ ၂၅၀၊ ပေါက်ဈေးခ၊ ဘာခညာခနဲ့၂ ဆနီးပါးလောက် ကျသွားတယ်။ ရက်ကလည်း ဘယ်လိုမှညှိလို့ မရတာနဲ့ဝိုင်းမပါဘဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက်အတိုင်း သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ ဆူနမ်က ပရိုက်ဗိုက်တိုးတွေ စုံစမ်းပြီး ပရုိုက်ဗိုက်တိုးနဲ့သွားချင်တယ်။ ကိုစကာရီကာနိုင်ငံမြို့ တော် ဆန်ဟိုဆေးမြို့ လယ်ခေါင်က လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိဘူး မြို့ လည်ခေါင်က ဟိုတယ်တွေဆီမှာ မတည်းနဲ့ လို့ဘလော့တွေကပြောတယ်တဲ့။ ညဖက်တယောက်တည်း လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိတဲ့နေရာသွားရင် ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ မြို့ လယ်ခေါင်မှ လုံခြုံမှုမရှိဘူး။ ဝိုင်းက စပိန်စကားပြောတတ်တယ် ကိုယ်တို့ က စပိန်စကားမတတ်ဘူး ပရိုက်ဗိုက်တိုးနဲ့ မှ ကောင်းမှာ။ ကိုစကာရီကာနိုင်ငံကို လာလည်တဲ့လူတိုင်း စပိန်စကားမပြောတတ်ဘူး နိုင်ငံတကာက လာနေတာပဲဟာကို။ ပရုိုက်ဗိုက်တိုးက ဈေးကြီးလိုက်တာ ၃ ရက်တည်းကို ၆၀၀ ကျော် ဈေးကြီးတယ်။ ဝိုင်းစီစဉ်သလိုပဲ သွားချင်တယ်။ viator တိုးတွေက ဆန်ဟိုဆေးမြို့ ကနေ စထွက်တာ tourist attraction တွေက ဆန်ဟိုဆေးမြို့ ကနေ ၃ ၊ ၄ နာရီဝေးတဲ့ မြို့ တွေမှာ။ ဘာနဲ့ တူသလဲဆိုတော့ မေရီလန်းကနေ ၄ နာရီဝေးတဲ့ နယူးယောက်ကိုသွားလည် မေရီလန်းကိုပြန်လာ ကားပေါ်မှာ အချိန်ကုန်တယ်။ ကိစ္စမရှိဘူး ကယ်လီဖိုးနီးယားဖက်ကို သွားလည်တုန်းကဆို တနေ့၅ နာရီ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ တနေရာနဲ့ တနေရာ ဝေးတာကိုး။
ဆူနမ်က ကြိုးတံတားကိုသွားတဲ့ viator တိုးရှိရင် ကိုယ်စီစဉ်တာကို လက်ခံမယ်တဲ့။ viator tour မှာ ဆန်ဟိုဆေးမြို့ ကနေ ကြိူးတံတားသွားတဲ့တိုးမရှိ ဆန်ဟိုဆေးမြို့ ကနေ ၄ နာရီလောက်ဝေးတဲ့မြို့ ကနေတော့ တိုးရှိတယ်။ ဆန်ဟိုဆေးမြို့ ကနေ အဲ့ဒီမြို့ ကိုသွားဖို့ကိုယ်မစီစဉ်နိုင်ဘူး။ ကြည့် ပရိုက်ဗိုက်တိုးက စီစဉ်ပေးနိုင်တယ်။ သူ သွားချင်တဲ့နေရာတွေကို အချိန်တိုတိုနဲ့သွားနိုင်တယ်၊ လူမပင်ပန်းဘူး၊ လုံခြုံစိတ်ချရတယ်၊ တည်းမယ့်ဟိုတယ်တွေကလည်း အကောင်းစား၊ ဟိုတယ်တွေမှာ ရေပူစမ်းပါတယ်။ ဆူနမ်က သူ့ တိုးထက် သာတယ်ဆိုတာ လက်ခံလောက်အောင် ရှင်းပြနိုင်ရင် ကိုယ့်တိုးကို သူလိုက်မယ်တဲ့။ ဆူနမ့်ကို viator တိုးဆီပါလာအောင် ကိုယ်မဆွဲဆောင်နိုင်၊ ဆူနမ့် ကို နိုင်အောင်မပြောနိုင်။ ဆူနမ်က သူ့ တိုးဒီလောက်ကောင်းတာ၊ သူ တလခွဲလောက် ပြင်ဆင်ထားရတဲ့တိုးကို ကိုယ်ဘာလို့ လက်မခံနိုင်မှန်း နားမလည်နိုင်ဘူး။ ကိုယ်ကလည်း ဆူနမ် ဘာလို့ ဈေးကြီးတဲ့ ပရိုက်ဗိုက်တိုးနဲ့သွားချင်ရတာလည်း နားမလည်နိုင်ဘူး။ ဝိုင်းပါရင် အကောင်းသား ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့၂ မဲ ၁ မဲ နိုင်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်တိုးကို ရွေးလိုက်လို့ ရတယ်။ ဆူနမ်ဟာ အတော့်ကို ခေါင်းမာတာပဲ ကြိုးတံတားကို မသွားရရင် သေမှာကျနေတာပဲ။ လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိရင် ဝိုင်း တယောက်တည်းသွားဖို့ဘယ်လိုလုပ် စီစဉ်မှာလဲ။ ဆူနမ်နဲ့ ကိုယ် ငြင်းခုန်ရန်ဖြစ်အော်ဟစ် နောက်ဆုံးတော့ ဆူနမ့်တိုးကို လက်ခံလိုက်ရတော့တယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ မကျေမနပ်နဲ့ ပေါ့ နောက်နောင် ဒင်းနဲ့ဘယ်တော့မှ ခရီးမသွားဘူး။ ခုမှပဲ ဝိုင်းတန်ဖိုးကို နားလည်သဘောပေါက်တော့တယ်။ မိန်းပြည်နယ် အကေဒီးယားအမျိုးသားဥယျာဉ်ကို သွားလည်တော့ ဘားဟာဘားမြို့ကမ်းနားက စားသောက်ဆိုင်မှာ နေ့ လည်စာစားဖို့တိုးဂိုက်ကညွှန်းလို့သွားမေးတော့ ၂ နာရီ စောင့်ရမယ်တဲ့။ ဝိုင်းက တို့ ဒီကိုလာတာ စားသောက်ဖို့ မဟုတ်ဘူး ငါးဈေးက လော်စတာရိုးဝယ် နေ့ လည်စာကို ခပ်သုတ်သုတ်စားပြီး လျှောက်ကြည့်ရအောင်တဲ့။
၂၀၁၈ မတ် ၁၀ တရုတ်တန်းမှာ ချစ်အစ်မကြီးမခိုင်နဲ့ဆုံတုန်းက မခိုင်အမျိုးသား ရိုက်ပေးထားတဲ့
ဓာတ်ပုံလေးကို သဘောကျလို့မဆီမဆိုင် တင်ပါတယ်..ကင်မရာမန်းက lens အသစ်ကို စမ်းချင်နေတာ...
ကိုယ်နဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူ ဝါသနာတူ ခရီးသွားဖော်ကောင်းကောင်းရတယ်ဆိုတာ ကံကောင်းခြင်းတမျိုးပဲ။ ကိုယ် ဆူနမ့်ကို စိတ်တိုနေတယ်ဆိုတာ သူက နည်းနည်းလေးမှ မရိပ်မိဘူး။ ဆူနမ်က သူဘာလုပ်လုပ် ကိုယ်ကလန်ကဆန်လုပ်မယ်၊ ရန်ဖြစ်မယ်လို့မှန်းထားတဲ့သူဆိုတော့ ကိုယ် သဘောမတူတာကို ခပ်အေးအေးပဲ။ ကိုယ့်မှာတော့ နောက်နောင် ဒင်းနဲ့ဘယ်တော့မှ ခရီးမသွားတော့ဖူး၊ ကြိုးတံတားပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ရမှာ ကြောက်တယ်လို့ ပြောရင် ကြိုးတံတားပေါ်ကနေ ဒင်းကို တွန်းချလိုက်မယ်လို့ဝိုင်းကိုပြောပြီး ရယ်လိုက်ရတာ။ ဘွဲ့ ယူတုန်းက သူ့ မိဘတွေကို လာ့ဗီးဂတ်လိုက်ပို့ တော့ တရုတ်တိုးစီးပြီးကတည်းက ဆူနမ်က တိုးတွေကို မကြိုက်တော့တာ။ တရုတ်တိုးကားတွေမှာ အိမ်သာပါပေမယ့် ၂ နာရီလောက်ဆို rest area တွေမှာ အိမ်သာအတွက် ရပ်ပေးတယ်။ ခင်သက်ထွေးဆူနမ်က rest area မရောက်ခင် ရှူးပေါက်ချင်လို့အောင့်ထား၊ ကားရပ်ရော သူ့ ခုံနေရာက နောက်ဆုံးခုံ လူကုန်အောင် စောင့်နေရင် ထွက်ကျလိမ့်မယ်။ မဖြစ်ချေဘူး excuse me ဆိုပြီး အိမ်သာအတင်းပြေးရတယ်တဲ့။ အဖေလည်း ကိုသက်ထွေး ဒါပေမဲ့ တခါမှ အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဘူး ရေသောက်တာကို လျှော့ရတာပေါ့တဲ့။ လူကြီးတွေတောင် တရုတ်တိုးကား စီးနိုင်ရဲ့ သားနဲ့ဆူနမ်ကမစီးနိုင်။ တရုတ်တိုးတွေက rush တော့ဖြစ်တယ် ကိုယ့်ကားလို စိတ်ကြိုက်စိမ်ပြေနပြေ နေလို့ တော့ ဘယ်ရပါ့မလဲ။ ကားမမောင်းချင်တဲ့ ကိုယ်နဲ့ ဝိုင်းနဲ့ ကတော့ တိုးကားက အဆင်ပြေတယ်။ ဘယ်သူမှလည်း တနေရာတည်းမှာ ၄၊ ၅ နာရီ မနေချင်ပါဘူး။ viator တိုးတွေက တရုတ်တိုးတွေလို မဟုတ်ဘူး ဥရောပသားတွေစီးတာ ဈေးကြီးတယ်။ ကိုယ် ဗီလာဒဲဖီးယားကို သွားလည်တုန်းက viator နဲ့တရုတ်ကားက ၇၅ ပဲ ပေးရတဲ့အချိန်မှာ viator တိုးက ၁၅၀။ ဥရောပသားတွေကြီးပဲ အာရှသားဆိုလို့ကိုယ်နဲ့အိန္ဒိယအဘိုးကြီးဒေါက်တာ ၂ ယောက်ပဲပါတယ်။
ဝိုင်း မက်ဆီကိုသွားလည်တုန်းကလည်း viator တိုး အဆင်ပြေတယ်တဲ့။ ဝိုင်းက ကိုစကာရီကာက ဘာဖြစ်လို့ လည်းမသိဘူး ၂ ခေါက်ရှိပြီ စီစဉ်တာပျက်တယ်။ မလျှော့ သေးဘူး ဧပြီလလယ်ပြန်ရောက်ရင် ကိုစကာရီကာကို တတိယအခေါက် စီစဉ်ပြီးသွားလည်မလို့ တဲ့။ good luck ! never give up ! လို့ချီးယားလိုက်ကြသေးတယ်။ ကြာသပတေးနေ့ ည ၁၀ နာရီခွဲ ဆူနမ်က ဂရင်းကဒ်ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုရင် ကိုစကာရီကာဗီဇာလိုတယ်လို့ဖိုရမ်မှာပြောနေတယ်။ ကိုစကာရီကာဆိုဒ်က update မလုပ်တာကြာပြီ ဖိုရမ်က မနှစ်က update လုပ်ထားတယ်။ ဗီဇာလိုတယ်ဆိုရင် တနင်္လာနေ့ရုံးကနေခွင့်ယူပြီး ဗီဇာသွားလုပ်မယ်။ ကြသပတေးနေ့ ညဥ့်နက်သန်းခေါင်သွားမှာ ၄ ရက်နဲ့ဗီဇာရပါ့မလားနဲ့စိတ်ပူရပြန်ပြီ။ သောကြာနေ့ မနက် ရုံးမှာအလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး ဒီစီနဲ့ နယူးယောက် ကိုစကာရီကာသံရုံးတွေကို ဖုန်းအဆက်မပြတ်ခေါ်ပေမယ့် မကိုင်ဘူး။ ချီကာဂိုသံရုံးကတော့ ကိုင်တယ် ပတ်စ်ပို့ စ်နဲ့ ဂရင်းကဒ်ကို ဓာတ်ပုံပို့ ပေးပါတယ့်။ အကြံရပြီ စတိတ်မှာရှိတဲ့ ကိုစကာသံရုံးအကုန်လုံးကို အီးမေးလ်ပို့ လိုက်တယ်။ နေ့ လည်ကျတော့ မီယာမီသံရုံးက အီးမေးလ်ပြန်လာတယ် ဂရင်းကဒ် ၆ လသက်တမ်းရှိနေရင် ဗီဇာမလို တိုးရစ်အလည်ဗီဇာ B1 B2 နဲ့ တောင် အလည်လာလို့ ရတယ်။ နောက်ချီကာဂိုသံရုံး၊ လော့အိန်ဂျယ်လစ်သံရုံးတွေက အီးမေးလ်ပြန်လာတယ် ဗီဇာမလိုပါတဲ့။ ဒီစီနဲ့ နယူးယောက်ကတော့ အတော်လေးကြာမှ ပြန်လာတယ်။ ကိုစကာရီကာကို ခရီးသွားမယ်လို့အဖေ့ကိုပြောတော့ ခရီးတွေသိပ်မသွားနဲ့ပိုက်ဆံစုဦးတဲ့။ အဖေ သမီး အရက်မသောက်၊ ဆေးလိပ်မသောက်၊ ဘားလည်မသွား၊ ပိုက်ဆံအပိုမသုံး၊ ခရီးမှမသွားရင် ဘာမှအပန်းဖြေစရာမရှိဘူးလို့ပြန်ပြောတော့ ဘာမှမပြောတော့ဘူး။
ကိုယ့်ကျတော့ ခရီးမသွားနဲ့ပိုက်ဆံစု သူကျတော့ ဥရောပကို သွားချင်လို့ တဲ့။ နောက်ကြုံမှ ဥရောပကိုမသွားနဲ့အဖေရေ ပိုက်ဆံစုလို့ပြောလိုက်ဦးမယ်။ မောင်မောင်ကလည်း စန်းထွန်း ခရီးသိပ်မသွားနဲ့ပိုက်ဆံစုနဲ့ ။ နောက်မှမေးလိုက်ဦးမယ် နင့်မှာ ပိုက်ဆံစုပြီးသား ဘယ်နှစ်ပြားရှိလဲလို့ ။ အလုပ်ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ပြီး ရှာထားတာတွေ ဘာမှမသုံးမစား ခြစ်ကုတ်ပြီး မစုနိုင်ပါဘူးတော်။ ဘဝဆိုတာ တိုတိုလေး ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေ မလုပ်လုိုက်ရဘဲ သေသွားခဲ့ရင် ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို နောက်ဘဝဆီလည်း သယ်သွားလို့ မရဘူး။ ယောကျာ်းမယူသေးဘူးလား၊ ခရီးတွေသိပ်မသွားနဲ့ပိုက်ဆံစုလို့ ပြောလို့ သူတွေကို သိပ်အမြင်ကပ်တာပဲ။ ခရီးသွားတယ်ဆိုတာ ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းမှ၊ ခရီးသွားဖို့ပိုက်ဆံလည်းရှိဦးမှ၊ ခွင့်ကလည်း ရဦးမှ၊ ခရီးသွားမယ့်အဖော်လည်း ရှိဦးမှ။ ခရီးသွားရင် ရတဲ့အတွေ့ အကြုံ၊ အတွေးအမြင်သစ်တွေက ဘာနဲ့ မှ မလဲနိုင်ဘူး။ စတိတ်မှာ ၇ နှစ်နေပြီးမှ စတိတ်ပြင်ပထွက်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ရေခြားမြေခြား ပထမဆုံး နိုင်ငံရပ်ခြားခရီးဆိုပါတော့။ ခု ပို့ စ်တင်တယ့်အချိန်ဆို ကိုစကာရီကာရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ မီးတောင်တက်တဲ့လမ်း၊ ကြိုးတံတား၊ ကော်ဖီစိုက်ခင်း၊ ပနားမားတူးမြောင်း ဘယ်နေရာများ ဆူနမ်နဲ့ ကိုယ် နောင်ဂျိန်ချနေကြမလဲမသိ။ ပြန်လာမှပဲ ကိုစကာရီကာ၊ ပနားမားသွား တောလားပို့ စ်တွေ တင်ပါဦးမယ်။
မတ် ၁၈၊ ၂၀၁၈။
သာမီးဆိုဘယ်သွားသွားအိမ်ကိုမပြောဘူးရယ်...ပြောရင် စိတ်ပူနေမှာစိုးတာရယ် ပိုက်ဆံတွေတအားသုံးတယ်မှတ်နေမှာစိုးတာရယ်..ဟီးးးး
စန်းထွန်းလေးလှနေတာ ကျန်းမာရေးကောင်းနေမှန်းပေါ်နေလို့ ဝမ်းသာသွားတယ်